နေ့လိမ်းခရင်မ်နဲ့ ညလိမ်းခရင်မ် အကြောင်းကိုရော သိထားပြီးပြီးလား??? - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » နေ့လိမ်းခရင်မ်နဲ့ ညလိမ်းခရင်မ် အကြောင်းကိုရော သိထားပြီးပြီးလား???
နေ့လိမ်းခရင်မ်နဲ့ ညလိမ်းခရင်မ် အကြောင်းကိုရော သိထားပြီးပြီးလား???
နေ့ပိုင်းနဲ့ ညပိုင်း အသားအရေထိန်းသိမ်းပုံမတူညီတာကြောင့် နေ့လိမ်းခရင်မ်နဲ့ ညလိမ်းခရင်မ်ဆိုပြီး ကွာခြားသွားတယ်။ နေ့ပိုင်းမှာ နေရောင်ကြောင့် အသားအရေပျက်ဆီးတတ်တာမို့ မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ဖို့ နေ့လိမ်းခရင်တွေကို သူံးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ညပိုင်းမှာတော့ အသားအရေပျကိဆီးစရာမရှိတော့ဘူး။ ပျက်စီးသွားတဲ့အသားအရေကို ပြန်လည်ထိန်းသ်ိမ်းဖို့ သာလိုအပ်တယ်။ အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ညလိမ်းခရင်တွေသုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့လိမ်ခရင်တွေမှာ နေလောင်ကာလိမ်းဆေးတွေနဲ့ အစိုဓာတ်ထိန်းဆေးတွေ ပါလေ့ရှိတယ်။ ညလိမ်းခရင်တွေမှာ အစိုဓာတ်ထိန်းဆေးနဲ့ အရေပြားအားဖြည့်ဆေး(serum, essence)လို ဆေးတွေ လိမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။
day cream တွေဟာ နေ့လိမ်းခရင်မ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ အရေပြားကာကွယ်ဖို့ အဓိကသုံးတယ်။ ဆေးထဲမှာ နေလောင်ကာဆေးတွေပါဝင်ပြီး အရေပြားအစိုဓာတ်ထိန်းဖို့ moisturizer တွေ ပါလေ့ရှိတယ်။ ဒါ့ပြင် အသားအရေပျက်ဆီးမှုကိုကာကွယ်ဖို့ အင်တီအောက်စီးဒင့်တွေလည်း ထည့်ကြတယ်။ မိတ်ကပ်မလိမ်းခင် day cream ကို အောက်ခံ foundation အနေနဲ့ လိမ်းကြပါတယ်။ လိမ်းထားခြင်းအားဖြင့် နေလောင်တာကို ပုံမှန်ထက်ပိုခံနိုင်ကြတယ်။
night cream တွေကို ညဖက်အိပ်ခါနီးလိမ်းရတယ်။ နေ့ပိုင်းက ပျကိစိးသွားတဲ့အသားအရေကို ညပိုင်းမှာ ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ လိမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အသားအရေပြုပြင်ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ serum, essence , ampoule စတဲ့ အရေပြားအတွင်းပိုင်းထိ ပြုပြင်တဲ့ဆေးတွေပါတယ်။ အစိုဓာတ်ထိန်းဆေးတွေလည်း ပါလေ့ရှိတယ်။ hyaluronic acid, vitamin E စတာတွေ ထည့်လေ့ရှိတယ်။ အသားအရေပြုပြင်ဆေးအများစုဟာ night cream မှာ ပါဝင်လေ့ရှိတာကြောင့် day cream တွေထက် အရည်ပ်ုပျစ်လေ့ရှိပါတယ်။
serum တွေမှာ hyaluronic acid, ceramides တွေပါလေ့ရှိတယ်။ အရေမပျစ်ဘူး။ လိမ်းပြီး စေးကပိတာမရှိဘူး။ night cream တွေမှာ petrolatum, mineral oil တွေ ပါလေ့ရှိတာကြောင့် စေးကပ်ကပ်နေတာရှိတယ်။ serum အများစုဟာ အရေပြားစုပ်ယူမှုအားကောင်းသလို ပါဝင်ပမာဏမြင့်မားတယ်. လေနဲ့ထိရင်လည်း ပျက်ဆီးလွယ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် လေလုံးပြီး အေးမြခြောကိသွေ့တဲ့ နေရာမှာ ထားသင့်တယ်။ serum တခုကို သုံးပြီး ၆လ-၁နှစ်အတွင်း ကုန်အောင် သုံးသင့်တယ်။
cream တွေက အဆီနဲ့ ရေကို ရောပြီး ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆီများလေ ခရင်မ်ပိုပျစ်လေပဲ။ serum တွေကတော့ ရေဓာတ်အခြေခံထုတ်ထားတဲ့ အရည်မျိုးဖြစ်တယ်။ ရေထက် နည်းနဘ်းပဲပျစ်တယ်။ ပမာဏနညိးနည်းနဲ့ အာနိသင်ထိရောက်အောင် ပြုလုပ်ထားတယ်။
အဆီပြန်တဲ့အသားအရေမှာ ခရမ်တွေမသူံးသင့်ဘူး။ oil-free (အဆီမပါတဲ့) lotion နဲ့ serum တွေသာ သုံးသင့်တယ်။ ကျန်တဲ့အသားအရေမှာတော့ ခရင်မ်တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
skin care သီအိုရီအရ အရည်ကျဲလေ မော်လီကျူးဆိုက်သေးငယ်တာကြောင့် အရေပြားထဲ စိမ့်ဝင်နိုင်လေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရည်ကျဲတာတွေ အရင်လိမ်းပြီး နောက်မှအရည်ပျစ်တာ ဆက်လိမ်းသင့်တယ်။
နပေို့ငြးနဲ့ ညပိုငြး အသားအရထေိနြးသိမြးပုံမတူညီတာကှောငြ့ နလေိ့မြးခရငမြနြဲ့ ညလိမြးခရငမြဆြိုပှီး ကှာခှားသှားတယြ။ နပေို့ငြးမှာ နရေောငကြှောငြ့ အသားအရပကွေဆြီးတတတြာမို့ မပကွစြီးအောငြ ကာကှယဖြို့ နလေိ့မြးခရငတြှကေို သူံးကှတာဖှစပြါတယြ။ ညပိုငြးမှာတော့ အသားအရပကွေိဆီးစရာမရှိတော့ဘူး။ ပကွစြီးသှားတဲ့အသားအရကေို ပှနလြညထြိနြးသြိမြးဖို့ သာလိုအပတြယြ။ အဆိုပါ ရညရြှယခြကွနြဲ့ ညလိမြးခရငတြှသေုံးကှတာဖှစပြါတယြ။ နလေိ့မခြရငတြှမှော နလေောငကြာလိမြးဆေးတှနေဲ့ အစိုဓာတထြိနြးဆေးတှေ ပါလရှေိ့တယြ။ ညလိမြးခရငတြှမှော အစိုဓာတထြိနြးဆေးနဲ့ အရပှေားအားဖှညြ့ဆေး(serum, essence)လို ဆေးတှေ လိမြးရတာဖှစပြါတယြ။
day cream တှဟော နလေိ့မြးခရငမြတြှဖှစေကြှတယြ။ အရပှေားကာကှယဖြို့ အဓိကသုံးတယြ။ ဆေးထဲမှာ နလေောငကြာဆေးတှပေါဝငပြှီး အရပှေားအစိုဓာတထြိနြးဖို့ moisturizer တှေ ပါလရှေိ့တယြ။ ဒါ့ပှငြ အသားအရပကွေဆြီးမှုကိုကာကှယဖြို့ အငတြီအောကစြီးဒငြ့တှလညြေး ထညြ့ကှတယြ။ မိတကြပမြလိမြးခငြ day cream ကို အောကခြံ foundation အနနေဲ့ လိမြးကှပါတယြ။ လိမြးထားခှငြးအားဖှငြ့ နလေောငတြာကို ပုံမှနထြကပြိုခံနိုငကြှတယြ။
night cream တှကေို ညဖကအြိပခြါနီးလိမြးရတယြ။ နပေို့ငြးက ပကွိစိးသှားတဲ့အသားအရကေို ညပိုငြးမှာ ပှနလြညပြှုပှငဖြို့ လိမြးရတာဖှစပြါတယြ။ တနညြးအားဖှငြ့ အသားအရပှေုပှငဆြေးတှဖှစေပြါတယြ။ ဒီထဲမှာ serum, essence , ampoule စတဲ့ အရပှေားအတှငြးပိုငြးထိ ပှုပှငတြဲ့ဆေးတှပေါတယြ။ အစိုဓာတထြိနြးဆေးတှလညြေး ပါလရှေိ့တယြ။ hyaluronic acid, vitamin E စတာတှေ ထညြ့လရှေိ့တယြ။ အသားအရပှေုပှငဆြေးအမွားစုဟာ night cream မှာ ပါဝငလြရှေိ့တာကှောငြ့ day cream တှထကြေ အရညပြုပစွလြရှေိ့ပါတယြ။
serum တှမှော hyaluronic acid, ceramides တှပေါလရှေိ့တယြ။ အရမပေစွဘြူး။ လိမြးပှီး စေးကပိတာမရှိဘူး။ night cream တှမှော petrolatum, mineral oil တှေ ပါလရှေိ့တာကှောငြ့ စေးကပကြပနြတောရှိတယြ။ serum အမွားစုဟာ အရပှေားစုပယြူမှုအားကောငြးသလို ပါဝငပြမာဏမှငြ့မားတယြ. လနေဲ့ထိရငလြညြး ပကွဆြီးလှယတြယြ။ ဒါ့ကှောငြ့ လလေုံးပှီး အေးမှခှောကိသှတေဲ့ နရောမှာ ထားသငြ့တယြ။ serum တခုကို သုံးပှီး ၆လ-၁နှစအြတှငြး ကုနအြောငြ သုံးသငြ့တယြ။
cream တှကေ အဆီနဲ့ ရကေို ရောပှီး ထုတထြားတာဖှစပြါတယြ။ အဆီမွားလေ ခရငမြပြိုပစွလြပေဲ။ serum တှကတေော့ ရဓောတအြခှခေံထုတထြားတဲ့ အရညမြွိုးဖှစတြယြ။ ရထကြေ နညြးနဘြးပဲပစွတြယြ။ ပမာဏနညိးနညြးနဲ့ အာနိသငထြိရောကအြောငြ ပှုလုပထြားတယြ။
အဆီပှနတြဲ့အသားအရမှော ခရမတြှမသေူံးသငြ့ဘူး။ oil-free (အဆီမပါတဲ့) lotion နဲ့ serum တှသော သုံးသငြ့တယြ။ ကနွတြဲ့အသားအရမှောတော့ ခရငမြတြှကေို အသုံးပှုနိုငပြါတယြ။
skin care သီအိုရီအရ အရညကြွဲလေ မောလြီကွူးဆိုကသြေးငယတြာကှောငြ့ အရပှေားထဲ စိမြ့ဝငနြိုငလြဖှစေပြါတယြ။ ဒါ့ကှောငြ့ အရညကြွဲတာတှေ အရငလြိမြးပှီး နောကမြှအရညပြစွတြာ ဆကလြိမြးသငြ့တယြ။
Ref : skincaretips